Hebei Runfeng cryogenika fitaovana Co., Ltd.dia orinasa teknolojia vaovao manokan-tena manokana amin'ny famolavolana, ny fanamboarana ary ny fikarohana ireo sambo fanindriana ambany mari-pana. Ny vokatra vokarin'ny orinasa dia tavoahangy vita amin'ny fantsom-panafanana ambany mari-pana, tanky fitehirizana ambany-hafanana, sambo tsindry D1, D2 ary vokatra hafa. Ny vokatra isan-taona amin'ny tavoahangy maripana ambany dia mihoatra ny 40000, ary ny tanky fitehirizana dia mihoatra ny 2000. Ny orinasa dia manana milina goavam-be lovia hydraulic swing, fanaraha-maso nomerika mandeha ho azy efatra milina famolahana lovia, fikajiana tarehimarika mandeha ho azy , milina fantsom-boasary boribory, vovo fitifirana vovo, milina miolakolaka CNC, famafazana elektrika, mpitsikilo famantaran-maso helium spectrometer, mpanadihady momba ny spectrum, detector ultrasonic automatique automatique, detector vovoka magnetika, rafitra fakantsary nomerika X-ray ary fitaovana famokarana sy fitiliana hafa. Manana orinasa maherin'ny 200 ny orinasa, ao anatin'izany ny olona maherin'ny 50 manana mari-pahaizana eny amin'ny oniversite na mihoatra, olona mihoatra ny 30 manana mari-pahaizana licence na mihoatra, mihoatra ny 20 talenta sy injenieran'ny teknolojia avo lenta, miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka sy ny rafitra fitokisana tsara kalitao. Ny orinasa dia manangona vola be isan-taona amin'ny famolavolana sy fanandramana teknolojia vaovao sy vokatra vaovao. Miezaha mamorona orinasa mahazatra amin'ny indostrian'ny mari-pana ambany.
1983 Niorina ny Runfeng Enterprise
Runfengfeng Enterprise dia natsangana tamin'ny taona 1983. Hatramin'ny nanombohany dia nanangana orinasa 4 nifandimby izy mba hananganana hery matanjaka matanjaka matanjaka manompo ny indostria maoderina, ary hivoatra tsy tapaka ary ho sahy hanavao. Izy ireo dia Runfeng mekanika sy herinaratra, Runfeng Machines, Runfeng Container ary Runfeng Commercial Concrete no nametraka ny vato fototra hanatanterahana ny tanjon'ny fananganana orinasa.
2004 Runfeng Electromekanika dia voasoratra anarana ary tafapetraka
Runfeng Electromekanika dia voasoratra ara-dalàna ary natsangana tamin'ny taona 2004. 8 000 metatra toradroa ny tranon'ny biraon'ny orinasa ary 20 000 metatra toradroa ny trano fanatobiana. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny famadihana herinaratra ambongadiny sy antsinjarany, mpankafy, paompin-drano, fitaovana enti-miasa ary rafitra fizarana herinaratra mandeha ho azy. Ary manangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo mpanamboatra trano fanta-daza.
2005 Runfeng Machines dia voasoratra anarana ary naorina
Runfeng Machines dia natsangana tamin'ny 2005 mba hanomezana mpanjifa vokatra avo lenta amin'ny alàlan'ny famokarana sy fametrahana kabinetra fitsinjaram-pahefana avo lenta ary ambany, fantsom-boaty, rafitra fanamainana, rafitra famatsian-drano, milina fanangonan-karena, fametahana fitaovana ary fitaovana ampanjifaina.
Niorina ny fitaovana Runfeng cryogenic
Niorina tamin'ny 2012. Ny orinasa cryfogenogen Runfeng dia niasa manokana tamin'ny famolavolana sy fanamboarana sambo faneriterena, fiara fitehirizana, varingarin-tsolika voajanahary, fitaovana feno ho an'ny tobin-tsolika, fitaovan'ny gazy indostrialy, rafitra famatsian-koona-to-gazy, tsy namboarina manokana kaontenera mahazatra, ary kaontenera avo lenta.
Niorina ny Runfeng Commercial Concrete 2012
Runfeng Commercial Concrete dia natsangana tamin'ny taona 2012. Ny orinasa dia manana tsipika famokarana roa 180 miaraka amin'ny vokatra isan-taona mirefy 3 tapitrisa metatra toratelo vita amin'ny varotra. Ny orinasa dia manohana kamio mpametaka marobe sy kamio paompy 49 metatra.
Tanjon'ny serivisy Runfeng
Runfeng dia manana mpiasa maherin'ny 300, injeniera 41, ary mpiasa maherin'ny 70. Eo ambanin'ny fitantanan'ny olona Runfeng, manomboka amina tany am-boalohany ka hatramin'ny fitaovana feno, manomboka amin'ny drafitra drafitra ka hatramin'ny fametrahana sy fananganana eo an-toerana, manomboka amin'ny traikefa amin'ny varotra ka hatrany amin'ny serivisy aorian'ny fivarotana, ny olona Runfeng dia misisika hanompo orinasa maro kokoa hahatsapa ny nofinofy sinoa ho azy asa fitoriana.